May Nyane: အမေရိကန်ကျောင်းပုံစံ နဲ့ သပြေညို
သဘောကျဖို့ ကောင်းလိုက်တာ အမရေ..၊ ဟုတ်တယ်နော်..၊ အမေရိကန် ပညာရေးစနစ်က ကောင်းကွက်တွေ၊ အတုယူစရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်၊ ဒါတွေကို အမတို့က အခုလို အတုယူပြီး ကလေးတွေ တိုးတက်ဖို့ လုပ်ပေးနိုင်တာ ချီးကျူးစရာပါပဲ၊ တစ်ခု မေးချင်လို့အမ..၊ သပြေညို ကျောင်းက သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စာအုပ်တွေမှာ မိတ္တူ အပိုတွေ ရှိလား? ရှိခဲ့ရင်ကော အပြင်က ကျောင်းသား မဟုတ်သူတွေ ဝယ်ခွင့် ရှိသလား? လို့ သိချင်လို့ပါ..။
သင်ရိုးက ထွေထွေထူးထူး မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်က သူငယ်တန်း သင်ပုန်းကြီး ဖတ်စာအုပ်ကိုပဲ ကိုင်တာပါ။ အစ်မတို့ တိုင်းပြည်က သင်ရိုးတွေ ကောင်းပါတယ်။ သင်နည်ဒ စနစ်နဲ့ ဆရာဆရာမတွေရဲ့ ၀မ်းစာ နည်းတာ၊ စနစ်တကျ သင်တန်းပေးတာတွေ မရှိလို့သာ ညံ့ကြရတာပါ။ ဒီတော့ ဒီ သင်ရိုးကိုပဲ အစ်မ ပြောခဲ့သလို သင်နည်း ပြောင်းပြီး သင်လိုက်ရင်ကို အတော် ဟုတ်သွားပါပြီ။ အမ ရှေ့တပတ်အတွက် ရေးထားတဲ့ အပုဒ်ထဲမှာ ပါပါတယ်။ အဓိကက နိုင်ငံတကာက အခြေခံပညာရေး (မူလတန်း) အတွက် သင်ကြားနည်းတွေကို သုံးဖို့ပါပဲ...
အမေရိကမှာနေတဲ့ မြန်မာခလေးတွေအတွက်ဝမ်းသာစရာဘဲနော်.. အမလိုဆရာမတစ်ယောက်ရှိတာ အရမ်းကိုအဖိုးတန်ပါတယ်....